Nankaiza ry « lehibe » ? | NewsMada
Nankaiza ry « lehibe » ?
Fifidiana solombavambahoaka. Efa nametraka ny antontan-taratasy forotsahan-kofidiana avokoa ireo vonona amin’izany. Mbola nomena fotoana kely aza ireo ratsy fiomanana, mba tsy hiteny hoe tampoka loatra… Fa ahoana tokoa moa no hoe akaiky loatra ny fotoana? Tsy efa fiomanana aman-taona ve izany hoe hirotsaka hofidiana izany?
Fanontaniana mifanjohy amin’izay indrindra: nankaiza ireo antoko lehibe izay manana ny tantarany teto amin’ny firenena, toa zara fa hita amin’ity fifidianana manaraka ity? Tena mila valiny io, na dia ho fihatsarambelatsihy fotsiny ihany aza.
36 ireo nilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena tamin’ny fihodianana voalohany. Samy nirotsaka tamin’ny alalan’ny antoko na fikambanana avokoa ireo. Toa tsy nisy tazana ny ankamaroan’ireny?
Raha tombanana, miverina ho adin’ny Tim sy ny Mapar ihany ity fifidianana solombavambahoaka ity. Ny ankamaroan’ireo tsy miankina aza, tsy tafiditra ho loha-lisitra tamin’iretsy antoko na vondron’antoko roa lehibe iretsy, dia miezaka ny handeha irery.
Maro ireo antoko tsy mari-pototra, ny mpitarika no nahazo fahefana vao nanangana izany, fa tsy niainga tamin’ny fototra. Misy ireo natsangana mba hanenjehana tanjona iray fotsiny: na lany na tsy lany ny mpitarika, rava ho azy eo izany.
Dia tsy mahagaga raha tsy miova ny tontolo politika misy eto. Tsy mba mijoro amin’ny fotoana tokony hijoroana. Mailaka ery anefa amin’ny fanakianana sy fanenjehana rehefa ivelan’ny kianja ilalaovana. Raha hotanisaina ireo antoko sy ireo mpanao politika nodradradradraina fa hoe “lehibe”, tsy ampy ny pejy iray amin’ny gazety. Aleo tsy hisy havahana koa, sao misy hilaza hoe manenji-dresy… Resy ahoana anefa? Tsy niady akory!
Izay tsy sahy mirotsaka mifaninana, tokony hangina amin’izay.